nandritra ny fivoriana voalohany amin'ny koreana ny vehivavy ao amin'ny fianakaviana
nandritra ny fivoriana voalohany amin’ny koreana ny vehivavy ao amin’ny fianakaviana
Raha tsorina, aho mbola tsy tena azo antoka izay mety ho. Afaka manazava ny zavatra ao koreana ho amin’ny guy, fa rehefa mba mampiseho ny maha-izy azy, ny tena maha izy azy ny zavatra hafahafa. Toa mba ho amin’ny fiteny samy hafa, ary ny toetra dia somary hafa kely. Izany tsy midika fa tsy mahafantatra ny tsirairay, na izany aza, isika tonga lavitra ny lalana hatramin’ny voalohany fivoriana dimy taona lasa izay, (ity lahatsoratra ity misy affiliate rohy, izay midika fa tsy hahazo isan-jato eo amin’ny fivarotana raha mividy rehefa manindry. Mariho fa ireo vola dia hijanona eo an-toerana. Misaotra anareo noho ny fanohanana.) Dia mafy ampy ny hetsika manokana fitsapana dia mora ho ahy. Jae Il ary izaho no Mampiaraka, roa volana lasa izay, fa ny zavatra ao amiko no nilaza tamiko fa izy no isan’ny iray, na dia mbola tsy nivady nandritra ny mihoatra ny telo taona. Ianao handeha Busan, aiza ianao no mipetraka, taiza ny fianakaviana monina, ary nolazaiko azy te mba ho avy hitsena anao. Minitra vitsy talohan’ny nahazo ny zandriko vavy ny trano, Jae-indro niteny ahy mba ho vonona, noho izany ny mpivady, na mandritra ny fotoana maharitra na tsia, matetika tsy handeha hitsena ny ray aman-dreniny, mandra-dia manapa-kevitra ny hanambady eto. Izaho dia tao anatin’ny efitrano iray niaraka tamin’ny reniny, ny rahavavy, ny vadiny sy ny zanany roa. Avy eo aho dia nampiasa kely koreana zazavavy dia nahafantatra aho tamin ny fotoana ho ahy ny maneho izay lehilahy antitra dia tokony ho mandika satria tsy ahy dia tsy ho tonga saina fa ny voalohany tena zavatra mamany dia tahaka ny,»Ô, ao tsara.»Izy tsy matavy.»Ary tsy haiko ny valiny marina. Raha ny fahitàna azy, izy ireo rehefa fikarohana, miantso sy milaza fa ny sipany any ivelany, ary izy dia ny Amerikanina, ny reniny irery ihany no azo heverina ho lehibe ny tovovavy any amin’ny tontolon’ny Tandrefana. Aho dia azo antoka fa lehibe kokoa noho ny azy sy ny anabaviny, sady manana tongotra — tena akanjo fohy kokoa noho ny azy ireo. Ny fanaraha-maso, izay nisy ny fanontaniana momba ny asa, ary raha toa izy dia faly ny sata maha-miasa zazavavy, dia nipetraka teo. Noho izany dia tsy maintsy mipetraka eo ambony latabatra ny kafe tao amin’ny efitrano fandraisam-bahiny, tamin’ny tany, eny, na dia nilazana mba hipetraka eo an-daniny ny farafara. Tsy mazava tsara ny zavatra tokony ho mitady. Ireo ny safidy roa: avy amin’ny reniny, izay nijery ahy tsy amin’ny teny, amin’ny ankamaroan’ny fotoana, na avy tamin ny rahavavy, izay tsy dia manome ahy ny cursory jerena. Aho ho tena feno fankasitrahana ho an’ny mino aho fa ny zavatra rehetra isika, satria nisy ny roa antsika misy ny ankizy izay efa tena kely ny efitrano mba hilalao, ary izy ireo dia heniky ny fahanginana hafahafa. Reny-Yi zoo nangataka anay, raha izahay no handeha hanambady, ary Jae-ol, nanazava fa vao te-hampiditra azy izy, ary nanazava fa angamba any Andrefana ny olona samy manana ny fahazarana rehefa nomena. Rehefa afaka izany, dia lasa mazava amintsika fa ny fianakaviana dia manantena ny sasany karazana fanambarana, ary rehefa tsy misy tonga, ny rivotra ao amin’ny efitrano»izy, ary ny rahavaviny dia tonga avy amin’ny sakafo, na dia mbola tsy hijery ahy tamin’izany fotoana.»Indray andro izy ireo ao amin’ny efitra hafa aho dia irery tao amin’ny efitrano fandraisam-bahiny izy rehefa tonga mba hangataka manao ahoana aho. Ranomaso no nivoaka ny masoko satria nahatsapa toy ny anabaviko tsy tia ahy, ary ny ampahany ratsy indrindra dia ny hoe tsy fantatro raha izany no ahy na ny olon-kafa izay tsy an-tsaina. Ka mazava ho azy sy ao amin’ny strangest fomba azo atao, dia vita, ary izaho nilaza taminy fa izy dia tonga ao amin’ny efitra fandraisam-bahiny. Hoy izy nanazava tamiko ny fomba nahatsapa aho ary nilaza fa izy dia tsy afaka miteny malagasy, ary izy dia tena menatra izany, fa tsy ny raharaha raha toa ka manan-danja izay mampianatra. Dia nitombo ho toy ny enta-mavesatra. Izany no fampiononana kely izany aho vahiny, amin’ny kely indrindra amin’ny hevi-dehibe izy fa tsy loza mitatao ho an’ny fianakaviana. Ny enta-mavesatra niverina rehefa nanontany azy aho raha te hihaona amin’ny lohan’ny fianakaviana, sy ny reniny Ary nohazavaiko fa na dia ireo faly hihaona amiko, ary izaho koa tsy te hahalala ny ray mandra-pahatonga ny fanambadiana dia nanambara ny, na, fara fahakeliny, ny iray Milaza ny fifandraisana, mihoatra antoka sy maharitra. Ny mpifikitra amin’ny nentin-drazana ireo tantara reko momba ny fianakaviana no miorim-paka fa ny dikany, ary izaho ihany no manana ny ray Sy ny vala, roa taona taty aoriana, na amin’ny ho avy. Ny fianakaviana izany dia ampiasaina ho ahy sy ny fampianarako isan-tokantrano, toy ny nahazatra ahy ho azy ireo. Izahay dia nitoetra nandritra ny rahavaviny ny trano rehefa nandeha tany Busan, izay tsy miova mandra-hanambady, ary efa vahiny nasaina mba handany ny alina ao ny ray aman-dreniny trano. Ny rahavavy nividy ahy kely ny mofo sy ny voankazo eo amin’ny maraina, satria fantatrareo fa lehibe ny lovia vary sy ny kimchi tsy tsara ny zavatra tiako hatao eo amin’ny maraina. Koa, raha toa ka mahatsapa fa tsy marina mihinana fa be vary, fa tsara kokoa ny manome ahy ny antsasaky ny zavatra nomeny ny olon-dehibe hafa, be loatra, ary hanome ahy ny ankizy ny habeny. Aho ao amin’ny fianakaviana tsy tapaka ny mangataka aho raha mba afaka mividy na inona na inona, na hanome ny tenako ny zavatra hafa, ary na dia mafana, izaho koa nahatsapa ho tena sarotra satria tsy te na mila na inona na inona mihitsy ary avy rehetra izany dia nanaraka izay nahatsapa aho fa mihoatra ny tokony tsy maintsy aterina fotsiny any amin’ny zazavavy. Nisisika, ary Jae-EKO, dia nilaza tamin’izy ireo, dia zavatra izay tiany ny antoko. Ny reny sy ny zoo tonga, ary tiako ny mieritreritra izany aho dia nivoaka ny fitiavana, noho ny fikirizana namihina azy rehefa nihaona voalohany azy, ary rehefa nanao veloma.
miezaka ny mamihina ny reniny, ny zavatra mbola tsy nataony teo aloha, ary dia nandalo teo amiko. Soatoavina miezaka mba ho tena mpandala ny nentin-drazana, ary avy eo, mijery toy ny mpifikitra amin’ny nentin-drazana, rehefa nihaona zhe amin’ny raiko ny vala, izay sarotra ho ahy ny mahatakatra. Ny tsy fisian’ny ny tsiky, hehy, na hafa-miteny zavatra hitako sarotra atelina. Talohan’ny fampakaram-bady ny lanonana any Korea, dia nivory ny fianakaviana ho an’ny sakafo, sy ny tsy mino aho fa efa ho ny raharaha hatreto, izay Jae-Joo ny fianakaviana, tsy mahafantatra, satria izany no ataoko, izaho dia miezaka fotsiny mba ho hanihany na kilalao olon-kafa ny lalao. Tao amin’ny fianakaviako, izany dia tokony ho tanteraka mialoha ny curve, eo amin’ny lafiny inona no ataontsika rehefa isika miara. Rehefa afaka izany, ny sakafo, ny fianakaviana sy ny zoo toa tsy mahazo aina amin’ny ny tokony ho antsika rehetra tsiky na mihomehy izany ny manodidina ahy ny fotoana rehetra, na fotsiny, mba hahatonga ny rivo-piainana ankapobeny maivana kokoa noho ny rivo-piainana, fa zava-dehibe fa ny fianakaviana fitehenan-tanana. Izaho no tena tsara vintana aho fa tsy manana ny vavy — in-lalàna-ny zazavavy avy koreana fianakaviana izay afaka manao ny safidy mba hanambady, ny sarotra kokoa dia afaka ny ho. Faly aho aho tsy toy ny aina toy ny fianakaviana. Na dia misy roa hafa ireo zavatra izay aho dia mahatsapa hafahafa momba, toy ny rehefa ny neny mandefa amiko ny boaty ny paoma, ny kitapo ny vary, ary ny roa tsiroaroa ny Lohataona ba kiraro, na antso nonexistence, ary ny hany fanontaniana dia hoe ny heater-miasa na tsia, tsy misy famantarana ny iray voalohany, fa tsy izay fantatro fa izy no nikarakara, ary tena tsara izy rehefa mampiseho azy io. Ny resaka dia tsy lalina na miavaka, fa izy ireo dia miankina amin’ny antsika. Ny fifandraisana dia tsy mba tahaka ny hafa izay manana aho, satria efa mba. Mba ho eken’ny ny vehivavy ao anatin’ny fianakaviana, izany no nahatonga ahy nanomboka ny fianarana koreana ho zava-dehibe, ary faly aho mba ho afaka manana ny resaka, na dia amin’ny faritra atsimon’i lingo, ary ny nerlandey any Avaratra, dia mbola afaka ho sakana amin’ny fahatakarana. Efa ho dimy taona izao izahay nihaona tamin’ny voalohany, ary izaho mbola mandre, te-hianatra bebe kokoa momba ny fianakaviana dia nanambady an, kanefa, mino aho fa ny dimy taona avy izao any dia mbola ho be dia be ny fanontaniana. Efa za-draharaha maro ihany hafahafa fotoana. Nanambady ny vadiny amin’ny teny alemà aho, ary nianatra zavatra manokana mba manana ny fahafahana mifandray amin’ny fianakaviany, miresaka shvedskom araka ny fiantso. Ny transcultural ny fanambadiana dia manampy zavatra eo amin’ny fiainanao izay afaka dia jereo. Izaho dia mandefa fitahiana maro sy ny firariantsoa. Jade, misaotra betsaka, vatosoa. Mino aho fa eto amin’ity tontolo ity. Izaho efa nianatra zavatra betsaka avy amin’izy ireo, fa te-hahafantatra be kokoa. Tiako ny andraikitry ny namihina sy nanoroka. Ataontsika izany amin’ny rehetra ny fianakaviana, ary dia gaga ny fotoana, fa izaho kosa mahafantatra anao toy izany. Haha, rehefa ny olona isika, handefa ny boaty ny voankazo dia midika hoe miahy antsika. Ny reniko indraindray mandefa ahy baoritra ny voankazo sy telo boaty mba ha-ha. Ny voalohany dia antsoina hoe ahy eo amin’ny finday, hoy izy nanontany ahy raha toa aho tia paoma.
Eny hoy aho, ary notapahany
Tsy hahatakatra ny antony, ary avy eo dia nisy boaty ny paoma ny andro manaraka. Maro loatra ny zavatra hohanintsika miara-alohan’ny lo. Tsy maintsy manao jak, Paoma, mofo, Paoma pie, ary misy namako izay tonga naniraka azy ho any amin’ny Paoma trano. Lol, tiako ny paoma, fa tsy mba mampihomehy.
Ary ny antony dia ny vary
Tena mavesatra, izay midika hoe ny sambo dia mety ho lafo vidy. Izany no tena mahasoa ho ahy izany. na raha tsy izany, sy ny mety ho ny rahavavinao ny trano. Nanontany azy aho raha toa ka afaka mandeha araka ny fianakaviany, ary izy dia nanaiky aho, ary tsy milaza izahay raha tsy teo an-tokonam-baravarana fa ny fianakaviana ao Korea tsy manana rehetra ny votoatin’ny bilaogy ity, raha tsy izy milaza fa raha tsy izany dia ny fananana ny Fanahy, ny tanàna ao Seoul, ary tsy azo (avoaka raha tsy misy fahazoan-dalana)
← Ny toerana hihaona ankizivavy ao Korea angon-drakitra
Ahoana no Hahafantatra Ny Aterineto tamin'ny Lehilahy Iray ny Fianakaviana sy ny Fifandraisana →